दोश्रो कार्यकालकालागि विसि | Jwala Sandesh
वि.सं. बुधबार, मंसिर १७, २०७७ तदनुसार2December 2020
दोश्रो कार्यकालकालागि विसि
| प्रकाशित मितिः शनिबार, फाल्गुन ८, २०७२ ::: 486 पटक पढिएको |
दैलेख काँग्रेस ले पनि निर्वाचन मार्फत नै आफ्नो सभाापति चुन्यो । संस्थापन पक्षका वागी उम्मेद्वारका रुपमा निर्वाचनमा होमिएका निर्वतमान सभापति कृष्णकुमार बिसी दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए । ५ सय ७९ मत खसेकोमा बिसीले ३ सय १४ मत ल्याई बिजयी बने । बिसी संस्थापनबाट आधिकारिक उम्मेदवार हुन नपाएपछि बिसीले आफ्नै फरक समूह बनाएर बागी बनेर दुबै पक्षका मत लिएर जितेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी संस्थापन समूहबाट आधिकारिक उम्मेदवार मणिराम रेग्मीले १३८ र देउवा पक्षका हिमबहादुर शाहीले ११६ मत प्राप्त गरेको बताइएको छ । यस्तै सचिवमा सचिवमा पनि भूपेन्द्र शाही निवार्चन भएका छन् भने कोषाध्यक्ष पदमा पूर्णबहादुर खत्री (चालिसे) निवार्चित भएका छन् ।
निर्वाचन मतको परिणाम पश्चात नेपाल न्यूज दैनिकका पत्रकार शेरबहादुर थापाले दैलेख काँग्रेस लाइ कसरी समेटनुहुन्छ भन्ने बारेमा निर्वाचित सभापति कृष्ण विसिसँग छोटो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ पाठककालागि गरिएका कुराकानीको साराशं ः
दोश्रो पटक सभापतिमा विजयी हुनुभएको छ, कसरी कुन आधारले निर्वाचित हुनुभयो ?
हेर्नुस मैले दैलेख काँग्रेसका लागि के गरेँ भन्दा पनि के गरिन भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । दैलेख काँग्रेसका जिम्मेवार प्रतिनिधि ज्यूहरुले मेरो कामको सहि मुल्याकंन गर्नुभयो । जसको फलस्वरुप मैले करिब ५४ प्रतिशत बढि मत ल्याएँ र पहिलो चरणमै जितेँ । मेरो आधार भनेकै आम काँग्रेसी कार्यकर्ता नै हुन्, आम दैलेखी जनता नै हुन् । दैलेखी जनताले म प्रति ठुलो अपेक्षा राखेका छन, कार्यकर्ताहरुले पनि अपेक्षा राखेका छन । मेरो जितको आधार नै यहि हो ।
दैलेख काँग्रेसको चुनावि प्रक्रिया सुरु भएकै विचमा कार्यालयमा तालाबन्दि समेत भयो यसको के कारण हो ?
सहि प्रश्न गर्नुभयो यहाँले । दैलेख काँग्रेसमा मलाई आउन नदिने खेल पनि हो यो, साथमा मतदान प्रक्रिया लाई विथोलेर आफूले चाहेजस्तो वातावरण बनाउन यस्तो खेल खेलिएको मलाई लाग्छ । यधपी दैलेख काँग्रेसका जिम्मेवार नेताहरु, पुर्व मन्त्रि, केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीहरु, केन्द्रिय र जिल्लाको निर्वाचन मण्डल सबैको दबाबमा यो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
अन्य दुइजना उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित हुदाँ अब कसरी अघि बढने योजना बनाउनुभएको छ ?
पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अनुरुप यो चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न भयो । मेरो उहाँहरु दुवै अग्रज नेताज्यूहरु सँग सुमधुर सम्बन्ध छ । म उहाँहरुलाई समेटेर लैजाने पक्षमा छु । हामीले सर्वसहमति गरेर उम्मेद्वार छनौट गर्न नसकेपनि अब त्यो क्षणलाई भुल्दै सबैसँग हातेमालो गरेर दैलेख काँग्रेशको उज्जवल भविष्यका खातीर हामी सबै दैलेखी नेता कार्यकर्ता हातेमालो गर्दै अघि बढने छौँ । स्वर्गीय पुर्व प्रम तथा पुर्व सभापति सुशिल कोइरालाको तेह्रौँ दिनको पूण्य तिथी मनाएर पर्सि नै हामी काठमाण्डोँ जान्छौँ । र त्यहाँबाट फर्केपश्चात जिल्ला कार्यसमिति मनोनार्थ एक भेला बोलाउने तयारी छ । जसको उदेश्य भनेको सबैलाई समेटनु नै हो ।
हजुर त संस्थापन र देउवा पक्षको वागी उम्मेद्वार त्यो पनि संस्थापन बाटै, केन्द्रमा कसलाई साथ दिनुहुन्छ त ?
यो कुरा मैले अहिल्यै भन्न जरुरी छैन, संस्थापन पक्षबाट अहिले सम्म उम्मेद्वारीको टुगों लागेको पनि छैन । हाम्रो प्रयास भनेको संस्थापन पक्षबाट एक मात्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउने भन्ने नै हो । यसकालागि हामीहरुले अधिकतम प्रयास गर्नेछोँ । नेताहरुलाई दबाब दिनेछोँ । यदि भएन भने त पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र त छदैँ छ नि त्यसैमा टेकेर अघि बढनेछौँ । देशको एक जिम्मेवार लोकतान्त्रीक पार्टी नेपाली काँग्रेस भएको नाताले हामी जिम्मेवार भएर अघि बढनुपर्छ ।
अन्त्यमा कसैलाई केहि भन्नु छ कि ?
सबैभन्दा पहिले त भारतमा मिडिया चलाएर समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको पत्रिकामा आफ्ना दुइशब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो । यसकालागि म मेरो तर्फबाट र दैलेख काँग्रेशको तर्फबाट नेपाल न्यूज परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । अनि भारतमा बस्नुहुने समस्त प्रवाशी नेपाली दाजुभाइहरु जसले देशको माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रवाशमा काम गर्न जानुभएका सबै काँग्रेसी कार्यकर्ताहरुलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु भने मलाई दैलेख काँग्रेसको नेर्तत्व गर्ने महान जिम्मा प्रदान गर्नुहुने सबै आदरणीय प्रतिनिधी ज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । जयनेपाल ।